‘माओवादीमा प्रवेश होइन, ध्रुविकृत हुँदैछौं’ - अन्तर्वार्ता - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
‘माओवादीमा प्रवेश होइन, ध्रुविकृत हुँदैछौं’
नयाँ शक्तिका देवेन्द्र पौडेल भन्छन्ः भट्टराईले स्पष्टिकरण सोध्दा जीवनमै पहिलो पटक चित्त दुख्यो
मनोज खतिवडा भदौ १
लेनिनको कोट गरेको र पत्रकार सम्मेलन गरेको विषयलाई लिएर हामीलाई त्यत्रो पत्र काट्न जरुरी नै थिएन।
नयाँ शक्ति नेपालका सहसंयोजक देवेन्द्र पौडेलसहित झण्डै डेढ दर्जन नेताहरु संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्। यतिसम्म कि, उनीहरु नयाँ शक्ति छोडेर माओवादी केन्द्र जाने चर्चा चलिरहेकै छ। पौडेलसहित १५ जना नेताहरुले हालै गरेको पत्रकार सम्मेलनपछि संयोजक भट्टराईले उनीहरुलाई स्पष्टिकरण समेत सोधे। यही सेरोफेरोमा नेता पौडेलसँग गरिएको कुराकानीः
वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता छ भनेर नयाँ शक्ति गठन गर्नुभयो, फेरि केही दिन अगाडि पूर्वमाओवादीहरुको बाहुल्य रहेको तपाईँहरुको एउटा समुहले १० बुँदे असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्यो। यो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेर के सन्देश दिन खोज्नुभएको?
नयाँ शक्ति गठन गर्दा माक्र्सवादका तीनवटा सारभुत तत्वहरुको विकास गर्ने भनिएको थियो। एउटा सोचाइमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको पालना, समाजमा शोषण अत्याचारको अन्त्य र गन्तव्य समाजवाद हुँदै साम्यवाद भन्नेमा स्पष्ट भएरै नयाँ शक्तिको निर्माण गरेका थियौं।
यी तीन कुरालाई नयाँ शक्तिले छाड्ने होइन, विकास गर्ने भनेको थियो। कुनैपनि समाज विज्ञानका वैज्ञानिकहरुको विचारलाई तोडमोड गर्नुहुँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट र दृढ थियौ। कुनैपनि दार्शनिकका सार्वभौम सिद्धान्तलाई तिनको सार्वभौमिकता समाप्त नभएसम्म तोडमोड र अपब्याख्या गर्न मिल्दैन तर त्यसको विकास गर्न मिल्छ। हामीले पनि नयाँ शक्ति गठनका क्रममा माक्र्सवादको विकास गर्ने भनेर सोचेका थियौं। यसको प्रशस्तै बहस र छलफलपनि गर्‍यौं हामीले तर भयंकर विकास गरेनौं। त्यसका लागि हामी भयंकर ठूला दार्शनिकपनि थिएनौं। नेपालमा अधिकार प्राप्तिका लागि भएका आन्दोलनको एउटा चरणचाहिँ गुज्रियो र त्यसका अपूर्णताहरुका सन्दर्भमा थप संघर्ष गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर वैकल्पिक रुपमा नयाँ पार्टीको परिकल्पना गर्यौं।
यहाँसम्म आइपुग्दा विभिन्न प्रकारका साथीहरुको जमघट भयो। तर, जनतामा यसको चरित्र के हो भन्नेमै कन्फ्युजन रह्यो। यसको चरित्र वामपन्थी वा फरक हो भन्ने हामीले प्रष्ट पार्न सकेनौँ। हामीले लेफ्ट डेमोक्रेटिक त भन्यौं तर पहिचान प्रष्ट भएन। यो पार्टी कुन समुदायको पक्षधर हो भन्नेपनि क्लियर भएन। यो उच्च घरानाका लागि खोलिएको पार्टी हो वा श्रमिकहरुको पार्टी हो? या यो मध्यमवर्गको पार्टी हो? पार्टीको पक्षधरतापनि प्रष्ट भएन। हामीले १० बुँदे मार्फत उठान गरेको विषय नै हामी श्रमिक र उत्पीडित जनता तथा राष्ट्रको पक्षमा छौं भन्ने हो। नेपालमा पनि किसान, मजदुर, उत्पीडित वर्गले स्वामित्व ग्रहण गर्ने समाजवाद निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छौं भन्नेमा केही विषयहरु सार्वजनिक गरेका हौं।
१० बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेर नयाँ शक्तिकै बाटो भएर गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन भनेर फरक बाटो समाउन लाग्नुभएको हो?
नयाँ शक्ति भनेको कुनै पार्टीको नाम होइन। यद्यपी बाबुरामजीले यो शब्द प्रयोग गरेर वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ, त्यसका लागि नयाँ शक्ति चाहिन्छ भन्दै गर्दा पार्टीको नाम नै नयाँ शक्ति रहन गएको हो। यो कुनै स्थायी नामपनि होइन। यो नाम फेर्ने भनेर हामीले संघीय समाजवादी फोरमसंग बस्दापनि हामीले चर्चा चलाएकै हौं।
वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भन्नेमा हामी अहिलेपनि दृढ छौं। हाल एउटा वृत्तको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ, अर्को वृत्तको नेतृत्व एमालेले गरेको छ। बाँकी छरिएर रहेका माओवादी आन्दोलनका विभिन्न धाराहरु, मधेसको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको धारा, जनजाति, मुश्लिम, महिलाले चलाएका आन्दोलनका धाराहरु ध्रुविकरणहुनेगरी तेस्रो ध्रुव बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।
एउटा ध्रुव कांग्रेस, अर्को एमाले र बाँकी देशभक्तिपूर्ण प्रगतिशील धाराको ध्रुविकरणले मात्र नयाँ शक्ति बन्छ। बाबुरामजीसंग अहिले कुरा चलेको तेस्रो ध्रुव बनाउने पहल तपाईँले गर्नु भन्ने हो। केही कर्मचारी, केही सिने क्षेत्रका साथीहरु आउनुभयो त्यो राम्रो भयो तर त्यसले मात्र पुग्दैन भन्ने हो। ७ वर्ष, १५ वर्ष र २५ वर्षको योजनासाथ देश समृद्ध बनाउन राज्यका निकायमा उपस्थिति नभएर सम्भव छैन। राज्यका निकायमा उपस्थिति हुनका लागि थ्रेसहोल्ड काट्नुपर्‍यो, राष्ट्रिय स्तरको पार्टी हुनुपर्‍यो, सदनमा त्यसको आवाज बुलन्द हुनुपर्‍यो र कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म पुग्न सकियो भनेमात्र हाम्रो एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामीले फराकिलो ढंगले सोचौं भनेका हौं। चुनाव जित्नु पर्‍यो, त्यसका लागि। चुनाव जित्नका लागि कांग्रेस एकातर्फ, एमाले अर्कोतर्फ र बाँकी सवैको मोर्चा, ध्रुविकरण, एकीकरण जे सकिन्छ त्यो हुनुपर्‍यो। विचार मिल्नेसंग एकता, ध्रुविकरणवा चुनावी मोर्चाबन्दी गरेर मात्र त्यो सम्भव हुन्छ भनेर हामीले उठाएका हौं।
तपाईँहरुले छलफलका लागि भनेर उठाएका विषयप्रति बाबुराम भट्टराई सकारात्मक हुनुभएन बरु तपाईँहरुको कदमलाई अवाञ्छित भनेर २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोध्नुभयो? तपाईँहरुको पत्रकार सम्मेलनपछि यो विषयमा बाबुराम भट्टराईको ‘रेस्पोन्स’ लाई कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ?
त्यो चौबिस घण्टे स्पष्टिकरणप्रति म खेद प्रकट गर्छु र दुःखित समेत छु। अहिलेपनि मैले बाबुराम भट्टराईलाई दिलैदेखि बौद्धिक व्यक्ति भनेर समर्थन र साथ दिन्छु। उहाँको बौद्धिक क्षमता र विषयवस्तु उठानप्रतिको निष्ठा मभित्र अहिलेपनि छ। तर, उहाँले आवेगमा आएर त्यसो गर्नुहुँदैन थियो। उहाँलाई दर्जनौँपटक त्यस्ता तामेली आउँदा हामीले प्रतिवाद गरेका छौं।
‘तपाईँलाई कारबाही किन नगर्ने, चौबिस घण्टाभित्र यसको जवाफ दिनुस्’ भनेर जुन प्रकारको पत्र उहाँको हस्ताक्षरमा आयो, आफ्नो जीवनमा म सबैभन्दा बढी यो पत्रलाई लिएर दुःखित छु। स्पष्टिकरण पत्र पठाउनुभन्दा बरु बोलाएर भेटेरै कुरा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। हामीले हाम्रो १० बुँदे लेनिनको कोटेसनबाट शुरु गरेका छौं। १९ औं शताब्दीमा सबैभन्दा बढी वैचारिक संघर्ष गरेको व्यक्ति हो लेनिन। उहाँसंग विमति राख्नपनि सकिन्छ। तर, सबैभन्दा बढी वैचारिक संघर्ष उहाँले नै गर्नुभयो। एसियामा कि माओले गर्नुभयो त्यो संघर्ष कि गान्धीले गर्नुभयो। यो कोणबाट हेर्दा लेनिन एकजना चर्चित व्यक्ति हो। उनी फौजी कमाण्डरमात्र होइन, वैचारिक व्यक्तिपनि हो। उहाँकै कोटेसन लेखेर हामीले केहि वैचारिक विषयहरु छलफलका लागि उठाएका हौं। त्यसलाई हामीले लिखित रुपमा कमिटीमा पनि दिएका छौं र पत्रकार साथीहरुका बीचमा पनि त्यसलाई राख्यौं।
लेनिनको कोट गरेको र पत्रकार सम्मेलन गरेको विषयलाई लिएर हामीलाई त्यत्रो पत्र काट्न जरुरी नै थिएन। भगतसिंहलाई फाँसी दिने जसो गरेर हामीलाई तामेली गर्न हुने थिएन भन्ने कुरा मेरो व्यक्तिगत अनुभूति हो।
तपाईँहरुले राखेका विषयप्रति पार्टी संयोजक नै सकारात्मक नभएपछि पनि यो अब पार्टीभित्रबाटै हल हुन सक्छ भन्ने लागेको छ?
हामीले यसलाई उहाँको हितमा उठाएको हो विरोधमा हैन। मैले कहिँपनि उहाँको विरोधमा एक शब्दपनि बोलेको छैन र सम्भवत उहाँको व्यक्तिगत विरोध जिन्दगीभरी गर्ने पनि छैन। तर, बाबुराम भट्टराई जत्तिको व्यक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘आइसोलेसन’ मा पर्नु हुँदैन। केही साथीहरुले उक्साउँदैमा उहाँ गुमनाम हुने दिशातर्फ जानु हुँदैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा हाजिर नभएर खाली वैकल्पिक मात्र हुन्छु भनेर उहाँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। खाली एकादेशमा उहाँ एकजना वौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, गर्न सक्ने क्षमता भएको भन्ने बाहेक केही हुनेवाला छैन।
राजनीतिमा कुटनीति पनि चाहिन्छ, राजनीतिमा कला पनि चाहिन्छ, राजनीतिमा अरुसंग सहकार्य गर्ने क्षमता र इच्छा शक्ति पनि चाहिन्छ। संघीय समाजवादीका साथीहरुले उहाँको प्रोटोकल र लिडरसिप मान्न तयार भएको अवस्थामा एकता गर्ने पहलकदमी लिन सक्नुपथ्र्यो। एउटा त्यो अवसरपनि गुम्यो। यसैगरी अघि बढ्ने हो भने त हामीले थ्रेसहोल्ड काट्नपनि नसक्ने, स्थानीय चुनावमा पनि मत कमजोर आउने, प्रदेशमा पनि कमजोर हुने भयो भने नयाँ शक्ति एउटा गफ गर्ने थलो हुने भयो। बुद्धिविलास गर्ने थलो मात्र बन्ने त्यस्तो पार्टीले उहाँ जत्तिको मान्छेलाई देशको नेतृत्व गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सक्दैन। त्यसैले उहाँकै हितमा हामीले यो विषय उठान गरेको हो। अब ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने त उहाँको कुरा भयो। हैन म एक्लै हिँड्छु, साथीहरु जे सुकै गरुन् भन्नुहुन्छ भने सांगठनिक रुपमा उहाँलाई साथ दिन गाह्रो हुन्छ।
अब तपाईँहरुको असन्तुष्ट समुहले के गर्छ?
हामीले प्रष्टसंग भनेका छौं कि नेपाली राजनीतिमा एउटा धु्रव कांग्रेस हो, अर्को एमाले हो र बाँकी धु्रवको नेतृत्व तपाईँले गर्नु भनेर बाबुरामजीलाई भनेका छौं। यसमा उहाँले पहल लिन सक्नुभयो भने ठीकै छ, सक्नुभएन भने हामी आफैंले पहल लिन्छौं।
उसो भए माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्ने भन्नुभएको हो?
माओवादी केन्द्र एउटा पाटो हो, नयाँ शक्ति अर्को पाटो हो, वैद्य र विप्लवजीहरु पनि एउटा पाटो हो। यस्तै संघीय समाजवादी पनि अर्को पाटो हो। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका सबै शक्तिहरु जोडिनुपर्छ। त्यसैले जो बढी ‘कम्फर्टबल’ हुन्छ हामीले उसैसंग ध्रुविकरणगर्ने भनेका छौं। तपाईँले यसलाई ख्याल गर्नुहोला, हामी कतै प्रवेश गर्दैछैनौं। ध्रुविकरणहुँदैछौं। र, यो प्रक्रियाबाट सबैलाई ध्रुविकरण गर्दै अगाडि बढ्छौं।
प्रकाशित १ भदौ २०७४, बिहिबार | 2017-08-17 17:33:51
नेपालका राष्ट्रसेवक कर्मचारीकाे क्षमता अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छ। यसको उपयाेग अहिलेसम्म हुन सकेकाे छैन, अब सरकारले उनीहरूकाे त्यो क्षमताको प्रयाेग गर्छ।